Ingnweta Ozi Nchọpụta n'Africa - AfricaArXiv
bipụtara Joy Owango on 10th July 2020 10th July 2020
N'ime Sayensị Dijitalụ usoro ntanetị na nyocha metụtara SDG, onye otu anyị na-ahụ maka ndụmọdụ bụ Joy Owango dere banyere SDG 4, Mmụta Ọzụzụ.
Gụọ akụkọ mbụ na digital-science.com/blog/perspectives/sdg-series-accessing-research_info-in-africa/
Joy Owango, onye isi na TCC Africa
Afọ ole na ole gara aga, mgbe m na-arụ ọrụ nzere m gụsịrị akwụkwọ na Mass Nkwukọrịta, ana m echeta nke ọma na m na-agbasi mbọ ike ịnweta akwụkwọ nyocha dị mkpa n'ọrụ m. O wutere m nke ukwuu na naanị ebe m nwere ike ị nweta akwụkwọ ndị ahụ bụ n’ọ́bá akwụkwọ nke ụlọ ọrụ nyocha mba ofesi na Nairobi. M ga-anọdụ ala n’ọ́bá akwụkwọ ahụ mgbe emechiri ya, naanị iji nweta faịlị e-akụ jiri WiFi ha. N'oge ahụ, echere m na nke ahụ bụ ihe dị mkpa - akụkụ nke mgba nke ịme akara mmụta postgraduate. Ọ bụ mgbe afọ iri gachara ka m chọpụtara gbasara mmegharị Open Access. Lee ihe na-emeghe anya! Otu n'ime 'ndị a ka m maghị maka nke a?' oge.
Otu n'ime iwe kacha njọ (ma, ka anyị chee ya ihu, iwe iwe ókè!) Akụkụ nyocha dị na ịnwa ịnweta akwụkwọ agụmakwụkwọ dị mkpa, naanị ịchọta na ọ nweghị. Nke a abụghị nsogbu ọhụụ. Ego akwụgogogo juru ebe nile n'akwụkwọ agụmakwụkwọ. N'ileghachi anya na Africa, mahadum dị elu enweghị ike ịnweta ịnweta eletrik iji rụọ ọrụ nyocha ma ọ bụ naanị data nyere ndị bipụtara ya na ndị ọrụ ụlọ ọrụ nyocha. Ọ bụ ihe nwute, ụfọdụ n'ime data a anaghị adị oge a, yabụ enwere mgbochi ọzọ na ịnweta ihe ọmụma banyere usoro ọhụụ na nyocha.
Imeri Ihe isi ike site na imekota
N’agbanyeghi nsogbu ndị a, ọtụtụ n’ime mpaghara Sub-Saharan ezukọtawo imepụta nke a njikwa ọbá akwụkwọ na-akwado ha agụmakwụkwọ na obodo nyocha. Ha na ndi nkorita na ndi otu ulo oru nyocha achoro ka ha nweta ihe ha choro iji choputa ihe nyocha. Agbanyeghị, n'agbanyeghị ịdị adị nke consortia ọba akwụkwọ ndị a, ma ewezuga Ọbá akwụkwọ Mba South Africa na Ozi Consortia, ọtụtụ ka na-adọga ịnweta ohere bara uru, mana dị oke ọnụ, maka nchọpụta nchọpụta. South Africa dị ka ihe dị iche abụghị ihe ijuanya dịka, dị ka Institutelọ Ọrụ UNESCO 2018 maka Statistics si kwuo, o mefuola 6.16% nke GDP na agụmakwụkwọ - nnukwu ụgwọ dị ukwuu atụnyere ọtụtụ mba ndị ọzọ dị n'Africa.
Na ntụle, consortia consortia dị na Europe na-enwe ike ibute nkwekọrịta Open Access na-agbanwe agbanwe, dị ka Projekt DEAL na Germany, nke mepụtara mmekorita ya na Springer Nature nke butere n'inwe edemede akwụ ụgwọ na mbipụta Open Access maka mbipụta ndị German site na otu ịkwụ ụgwọ. Dabere na nkwekọrịta ahụ, ndị nyocha na ụlọ ọrụ Projekt DEAL ga-enwe ike ibipụta akwụkwọ akụkọ dị 1,900 Springer Nature maka € 2,750 (ma ọ bụ ihe dị ka $ 3,000) n'otu akwụkwọ. Ego a bu ihe oke ego ma egosighi inweta ulo akwukwo ulo akwukwo nke Africa.
Mmụta dị mma na SDG 4
Kedụ ka mgbaru ọsọ UN nke mmepe UN na-aga gburugburu ogo Mmụta ga-esi nyere aka mee ka mgbanwe dị mma na mpaghara a? SDG4 nwere ebumnuche ndị a:
Site na 2030, gbaa mbọ hụ na ndị ntorobịa niile na oke ọnụọgụ nke ndị okenye, ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị, mezuru ịgụ na ọgụgụ.
Site na 2030, gbaa mbọ hụ na ndị mmụta niile nwetara ihe ọmụma na nkà dị mkpa iji kwalite mmepe na-adịgide adịgide, gụnyere, n'etiti ndị ọzọ, site na agụmakwụkwọ maka mmepe mmepe na ụzọ ndụ, ikike mmadụ, ịha nhatanha na nwoke, ịkwalite ọdịbendị nke udo na enweghị ime ihe ike, ụwa. ụmụ amaala na ekele maka ọdịbendị dịgasị iche iche na onyinye nke ọdịnala na mmepe na-adigide
Dị ka Akụkọ banyere European Economic Outlook Report of 2020 site na African Development Bank, ihe na-erughị 10% nke ndị bi afọ 25 na karịa nwere agụmakwụkwọ mahadum n'ofe mba Africa.
Nke a bụ ihe a tụrụ anya. Mmemme Postgraduate abụghị ihe dị ọnụ ala, na-efu n'etiti $ 4,000 na $ 18,000, dabere na ụlọ akwụkwọ na mahadum ahụ. Imirikiti ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na-akwado onwe ha ma na-achọkarị ịga akwụkwọ n'akụkụ akwụkwọ ha. Ingkwụ ụgwọ maka ịnweta mbipụta ndị a kwụrụ ụgwọ abụghị ihe kwere omume, ọ nwere ike bụrụ ihe kpatara nchegbu maka ọtụtụ ụmụ akwụkwọ, ebe ọ bụ na ịnweta ohere nyocha na-eme ka ụmụ akwụkwọ dozie maka ozi dịnụ karịa nke kachasị mkpa.
Studentsmụ akwụkwọ kwalitere na postgraduate na-abụkarị ihe ndabara, dị ka ọtụtụ n'ime ndị na-enye ego na-enwe ike ịkwụ ụgwọ maka ịnweta akụrụngwa achọrọ iji mee nnyocha, yana maka ebubo onye edemede chọrọ mbipụta nyocha ha. Ihe si na ya puta bu ihe nlere nke ndi nyocha n’etiti ndi na akwado akwukwo na ndi n’adighi. Mepee oghere nwere ike belata ahaghị nhata a, na-ahụ na ụmụ akwụkwọ nwetara agụmakwụkwọ kachasị mma, yana nke ahụ anaghị amachasịkwa site na nhọpụta nke akwụkwọ ọgụgụ ndị ụlọ akwụkwọ ọta akara ga-enye ha ohere, n'agbanyeghị ma enyere ha aka ma ọ bụ na anaghị akwado.
Mbelata erughị eru n’inweta ozi nyocha
Ihe omuma nyocha nke Open Access na-enwe ike ịme ka mmuta di elu site na ndenye umu aka na ndi nyocha. Nko akwukwo di omimi na nyocha nke ihe omumu gụnyere ihe ndi mmadu na akwado mmadu. Gluu nke jikọtara nke a bụ data. Karịsịa, Open Access data na-enye nkwado maka ịbawanye ogo njikwa nyocha a na-emepụta site na ịnyekwu nghọta na nyocha dị. Ndị na-eme nchọpụta na-enwe ike izere mbipụta ọrụ. Ha na-enwe ike ime ka a na-ahụ anya na mmetụta maka agụmakwụkwọ site na amaokwu. A na-ekerịta nyocha ha n'ụzọ dị mfe. Nke kachasị mkpa, ọ bụrụ na data ahụ dị ka Open Access, Ngwuputa ederede dị mfe.
Ihe na-enyere mmadụ aka inwe ọganihu
N'afọ 2007, ndị otu European nyere iwu na mba ndị Afrịka ga-etinye opekata mpe 1% nke GDP ha na nyocha na mmepe (R&D). Nke a bụ akụkụ nke Sayensi Sayensi, Teknụzụ na Innovation Maka Africa (STISA-2024) weputara nke na-ekwu banyere ọdịnihu Africa iji kwalite ma zaa ohere maka mmụba nke sayensị, teknụzụ na ihe ọhụrụ (STI) n'ofe kọntinenti ahụ. Na njedebe nke ụbọchị, akụrụngwa (ego, ụdị na nke mmadụ) ga-ekpebi ihe ịga nke ọma nke STISA-2024, na nke STI na mmepe ụlọ ọrụ na kọntinent. Ka ị na-amata uru nkwado mba ụwa na ntinye aka nke ndị mba ofesi, ọkwa nke ego na ego nke ndị Africa na-enyere ego aka ga-ekpebi ogo mba ndị nwere mmepe nke STI, n'ihi nke a, ụzọ maka ọdịnihu mmekọrịta ọha na eze na mmepe gburugburu ebe obibi na kọntinenti ahụ. (STISA Report 2019).
Iwu a emeela ka mba 15 dị na Africa kwere onwe ha iji opekata mpe 1% nke GDP ha na R&D. Mba ndị a bụ akụkụ nke Science Inye Science Council Initiative nke ebum n’uche ya bu ikwalite sayensị mepere emepe na data n’obodo ha. Ndi otu ulo akwukwo mahadum nke ndi Africa, hapu ndi umu akwukwo nile n’Afrika, emebekwala aka n’ịkwalite saiti na data di ka uzo iji bulite mmeputa nyocha nke ndi Africa ma me ka nnabata ya hu anya.
Na Septemba 2019, Etiopia nakweere a iwu imepe emepe emepe emepe emepe maka ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ ka elu. Na mgbakwunye na inye iwu Open Access na mbipụta na data, amụma ọhụrụ a gbara ndị sayensị ume ka ha mepee emepe site na ịgụnye 'emeghe' dị ka otu n'ime njirisi nyocha na nyocha nke atụmatụ nyocha. Nke a na-eme ka ọ bụrụ mba mbụ mba Africa nwere amụma nnabata, nke na-akwado Open Access na isiokwu niile edepụtara, akụkọ, akwụkwọ na data sitere na nyocha nke ndị ọrụ na ụmụ akwụkwọ kwalitere n'ihu ọha nke ụmụ akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ mahadum na-ahụ maka Mịnịstrị nke Science na Mmụta dị elu - ihe karịrị mahadum 47 dị n'ofe Ethiopia.
Ilepụ anya n'Ihu
Afrịka na-akwalite mbipụta agụmakwụkwọ Open Access site na Mahadum Afrịka nke Sciences (AAS), nke nwere Open Research Platform na mmekorita ya na Ngalaba 1000 (F1000). Ndi otu di ka Research4Life (nke Digital Science na-akwado site na ịnweta akụkụ) na-enyekwa ohere ịnweta ozi nyocha, ebe TCC Africa na-aga n'ihu na-akwado ndị na-eme nchọpụta site na iwulite ntụkwasị obi ha na ihe ọmụma banyere ịnweta ozi nyocha. Ọ na-enye usoro maka mbipụta ngwa ngwa na nyocha ndị ọgbọ na-emeghe nke ndị nyocha nke AAS kwadoro na mmemme a na-akwado site na ikpo okwu ego ya, Alliance for Accelerating Excellence in Science in Africa. Afrịka nwekwara ụlọ ọrụ ndozi akara ngwa ngwa a na-akpọ AfricaArxiv, nke na-anabata ntinye akwụkwọ site n'aka ndị ọrụ nyocha Africa na onye ọ bụla na-eduzi nyocha na Africa.
Mmepe ndị a na sayensị mepere emepe na-enyere aka melite ogo agụmakwụkwọ na Afrịka, ma nke kachasị mkpa bụ inye ndị na-eme nyocha Africa ka ha nwekwuo ogo nnwere onwe na nyocha ha. Site na itinye uche na imezu ebumnuche SDG ndị a, enwere olile anya na ndị ọrụ nyocha Africa, ma n'aka nke ndị obodo nyocha ụwa, ga-erite uru karịa ịnweta ohere ịnweta ozi nyocha, ya mere nyocha ka mma.
Tags: Joy OwangoEbumnuche ndị nwere ike ịzụlite
felis tristique in adipiscing id id, vulputate,